သင်တတ်နိုင်သည်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆရာဝန်တစ် ဦး ကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း စစ်ဆေးမှု - ကျန်းမာရေး | မေ 2022
နှိပ်ပါ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ဆီးဂိမ်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ပြင်းထန်သောအားကစား ရပ်ရွာ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီသတင်း သတင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီ
အဓိက >> ကျန်းမာရေး >> သင်တတ်နိုင်သည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည့်အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း
အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့်ခိုင်မာသည့်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ပိုက်ဆံအိတ်အတွက်အရေးကြီးသည်။ သင်၏သမိုင်းနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်ပံ့ပိုးသူသည်သင့်အတွက်အချိန်နှင့်ငွေကိုသက်သာစေမည့်သင့်အတွက်ဆေးကုသမှုကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်တွင်လက်ရှိအခြေအနေရှိပါကမှန်ကန်သောဆရာဝန်သည်၎င်းကိုသင်စီမံရန်ကူညီနိုင်ပြီးသင်၏အခြားကျန်းမာရေးပညာရှင်များနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုသင့်တော်မလဲ။
သင်အတော်လေးကျန်းမာနေပြီးပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများနှင့်ရံဖန်ရံခါဆေးညွှန်းများအတွက်သင်ယုံကြည်သူတစ် ဦး ဦး ကိုသာလိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်သင်ပိုမိုသိသာသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကဆေးကုသမှုနယ်ပယ်တွင်အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး ဦး လိုအပ်ပါသလား။ အလားတူယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံမှသင်တစ် ဦး ဦး ကြိုက်လား? ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်သင်အတွက်သာလားသို့မဟုတ်မိသားစုကျင့်ထုံးကို ဦး စားပေးပါသလား။ ဤမေးခွန်းများသည်သင်၏ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကိုအာရုံစိုက်ရန်နှင့်ကန ဦး စာရင်းကြီးကိုလျှော့ချရန်ကူညီနိုင်သည်ဟုယူအက်စ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအိန္ဒိယဆေးရုံမှမိသားစုဆရာဝန်တစ် ဦး ဖြစ်သောဒေါက်တာရာချယ်ထရီပက်ကဆိုသည်။
အလားအလာရှိသောပံ့ပိုးပေးသူဘုတ်အဖွဲ့ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းရှိမရှိထွက်ရှာတွေ့မှကောင်းပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘွဲ့အပြင်ဤဆရာဝန်များသည်နေထိုင်ခွင့်သင်တန်းကိုပြီးမြောက်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးစာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးကြောင်းအထောက်အထားများကိုနောက်ဆုံးပေါ်ထားရမည်။ သင်လည်ပတ်နိုင်သည် လက်မှတ်ရ သင်၏ဆရာ ၀ န်သည်ဘုတ်အဖွဲ့မှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်။ ထို့အပြင်သင်သည်သင်၏ပြည်နယ်ရှိသူတို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ကိုစစ်ဆေးပြီးအတိတ်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ထားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့၏စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာအရေးယူမှုများ၊ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း၊ ဆေးရုံဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များနှင့်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုငွေပေးချေမှုများရှိမရှိကိုသင်စစ်ဆေးချင်ပေမည်။
သင့်တွင်ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ Medicaid သို့မဟုတ် Medicare ရှိပါကသင်၏အာမခံအစီအစဉ်ကိုလက်ခံသူသို့မဟုတ်ရုံးသို့အလည်အပတ်သွားရောက်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သောပံ့ပိုးသူကိုသင်ရွေးချယ်လိုပေမည်။ သင်၏အာမခံပေးသူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ခြင်းသည်သင်၏inရိယာရှိပံ့ပိုးသူများကသင်၏အာမခံကိုလက်ခံရန်ပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏အာမခံကိုလက်မခံသူကိုသင်အမှန်တကယ်တွေ့လိုသည့်ပံ့ပိုးသူတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ရှိပါက၎င်းသည်သဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်သူမဟုတ်ပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍ သင်ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်သင်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိနိုင်သည်။
၄။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုမေးမြန်းပါ။
Yelp နှင့် ZocDoc တို့ကဲ့သို့သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်သေချာသည်။ သို့သော်မကြာခဏအကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များကိုသင်သိသောလူများထံမှရရှိသည်။ သင့်ရဲ့လူမှုရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှာသူတို့ရည်ညွှန်းနိုင်တဲ့ပံ့ပိုးသူရှိသလားလို့မေးပါ။ ပြီးတော့သူတို့ကသင့်ကိုအဲဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုဘာကြောင့်ခေါ်ရတာလဲလို့မေးပါ။ လူအများစုသည်အပြုသဘောဆောင်သည်ဖြစ်စေ၊ အနှုတ်ဖြစ်စေဖြစ်စေ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှလိုကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလေ့အကျင့်တစ်ခုမှပြောင်းနေလျှင်သို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့နေပါကသင့်အားပံ့ပိုးပေးသူစာရင်းကိုသင့်လက်ရှိပံ့ပိုးသူအားမေးမြန်းလိုပေမည်။
၅။ တည်နေရာ၊ နာရီနှင့်အသုံးပြုနိုင်မှုကိုရှာဖွေပါ။
ရဲ့ရိုးသား - အဆင်ပြေကိစ္စရပ်များဖြစ်ကြပါစို့။ သင့်ဆရာဝန်အသစ်သည်သင်၏အလုပ်သို့မဟုတ်အိမ်နားတွင်မဟုတ်ဘဲအခြားတစ်ဖက်၌ရှိနေပြီးသင်ရုံးသို့လာရောက်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးသူသည်အလွယ်တကူအခမဲ့ / တတ်နိုင်သောကားရပ်ရန်ရှိပါသလား။ သင်နှင့်နီးသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူကိုရှာဖွေခြင်းကသင်၏ကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
လွန်းကိစ္စရပ်များ mesh ကြောင်းအချိန်ဇယားရှိခြင်း။ ပုံမှန်ရုံးချိန်အပြင်ဘက်တွင်ရှိခြင်းသည်အရေးကြီးလျှင်ညနေသို့မဟုတ်စနေ၊ ထို့အပြင်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများအတွက်နာရီပေါင်းများစွာ (တယ်လီဖုန်း ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အခြားလွှမ်းခြုံမှုကဲ့သို့) ကိုဆက်သွယ်ပါ။ COVID-19 ကတည်းက ကို virtual ချိန်း အများကြီးပိုဘုံဖြစ်လာကြပြီ ၎င်းတို့ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်သောသို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်မှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လူနာများနှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်သည်ကိုမေးမြန်းပါ။ ၎င်းတို့သည်လူနာပေါ်တယ်ကိုသုံးသလားသို့မဟုတ်စာပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသလား။ ဤနည်းပညာကိရိယာများသည်စောင့်ရှောက်မှုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်သို့မဟုတ်မေးခွန်းများဖြေကြားရန် ပို၍ လွယ်ကူစေနိုင်သည်။
တခါတရံအရာအားလုံးစာရွက်ပေါ်တွင်ကြီးသောအသံနိုင်ပေမယ့်ပံ့ပိုးပေးသူ၏ရုံး၏အခြားရှုထောင့်မှန်ကန်တဲ့မထိုက်မတန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပံ့ပိုးသူနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုမီရုံးသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ လူနာသစ်များကိုလက်ခံခြင်းသည် (အလွန်အရေးကြီးသည်။ ) နှင့်ပံ့ပိုးသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရခြင်းကိုအဘယ်လူနာအမျိုးအစားများသည်လက်ခံသည်ဆိုပါစို့။
ချိန်းဆိုမှုတစ်ခုရရှိရန်ပျမ်းမျှစောင့်ခြင်းသည်မည်မျှကြာသည်ကိုမေးမြန်းပါ။ လည်ပတ်မှုတစ်ခုစီအကြားတွင်သင်လများစောင့်ရ ဦး မည်လော။ ရုံး ၀ န်ထမ်းများကသင့်ကိုအထောက်အကူပြုပုံရသလား။ သင်၏ကျန်းမာရေးကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်မည်သည့်နေရာတွင်သင်မည်သူနှင့်ဆက်သွယ်နေသည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ဆက်သွယ်နေသည်ကိုသင်ခံစားနိုင်သကဲ့သို့သက်တောင့်သက်သာခံစားလိုသည်။
သက်ဆိုင်သော: မင်းရဲ့ဆရာဝန်ဆီမသွားသင့်တဲ့အရာ ၅- ခု
ဒါကြောင့်သင်ဟာအဆင့်တွေကိုလိုက်ပြီးသင့်အတွက်မှန်ကန်သောပံ့ပိုးပေးသူကိုတွေ့ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ယခုသင်သည်သင်၏ပထမဆုံးချိန်းဆိုချိန်အတွင်းအတွေ့အကြုံကိုအာရုံစိုက်ပါ။ စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်စောင့်ဆိုင်းနေသောအခန်းကဘာလဲ? ရုံး ၀ န်ထမ်းတွေကဖော်ရွေလား။ ဆရာ ၀ န်သည်သင့်အားသိရန်နှင့်သင်၏ကျန်းမာရေးပြconcernsနာများကိုနားလည်ရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား၊ သို့မဟုတ်သူတို့သည်သင့်အားတံခါးမှနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေပါသလား။
သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးစတိုင်ဟာသင်နဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမရှိသင်ကြည့်ချင်တယ်။ သင်မည်မျှအလုပ်များသောကြောင့်သင်သည်အမှတ်ကိုမှန်ကန်စွာဖြတ်တောက်သောလူစားမျိုးလား။ သို့ဆိုလျှင်တိုတိုနှင့်အဓိပ္ပါယ်မဲ့သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်သင်နှင့်လိုက်ဖက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်စစ်မှန်သောဆက်ဆံရေးနှင့်စေ့စေ့စပ်စပ်စကားပြောဆိုမှုကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါကထိုပံ့ပိုးသူသည်သင့်အတွက်မသင့်တော်ပါ။
အမှန်တရားကတော့ သင်နှင့်အတူရရန်အဘို့အဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးတယ် ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာအလားတူဆက်သွယ်မှုပုံစံရှိသူတစ် ဦး ကိုရှာခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်၊ သင်၏ကျန်းမာရေးသည်သင်နှစ် ဦး ၏မည်မျှကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်မှုအပေါ်မူတည်သည်။
သင်၏လည်ပတ်မှုအပြီးတွင်၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်ဟုမခံစားရပါကထိုအရာသည်ကောင်းပါသည်။ သင့်မှာချိန်းဆိုမှုတစ်ခုကြောင့်သာတစ်စုံတစ် ဦး ကိုဆက်တွေ့ရန်မလိုအပ်ပါ။ Horizon Medical Group မှအဆုတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊ အထူးကုဆရာ ၀ န်နှင့်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုဆရာဝန်ရောဘတ်ဂျေဆမ်မီဆန်ကပြောကြားသည်။ ၎င်းသည်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သော်လည်းသင်၏ကျန်းမာရေးကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သူတစ် ဦး ကိုမတွေ့မချင်းစျေးဝယ်။ သွားသင့်သည်။
နောက်အဆင့်များ - အာမခံကိုအသိပေးပါ
သင်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုဆရာဝန်အသစ်တစ် ဦး နှင့်အခြေချပြီးသည်နှင့်ချောမွေ့သောအသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်အချိန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဆရာဝန်များကိုသင်ပြောင်းလဲနေကြောင်းသင်၏ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီအားအသိပေးရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည် (သင်ရှိထားသည့်ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍) နှင့်သင်ယခင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်လည်းဆက်သွယ်လိုပေမည်။
သင်၏ယခင်ပံ့ပိုးပေးသူသည်ဆေးမှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်၎င်းတို့တွင်ရှိသည့်စာမေးပွဲရလဒ်များကိုသင်၏ဆရာဝန်အသစ်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မလိုအပ်သောစာမေးပွဲများကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးသင်၏ဆရာဝန်အသစ်အားသင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကိုပိုမိုနားလည်စေနိုင်သည်။ သင်ဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အဆင်မပြေပါကပံ့ပိုးသူအသစ်၏ရုံးခန်းအစား၎င်းကိုတောင်းဆိုရန်စီစဉ်နိုင်သည်။
Celexa vs Zoloft: အဓိကကွာခြားချက်များနှင့်တူညီမှုများ